သက်ငယ်မုဒိမ်းမှု ကျူးလွန်သူများကို ထောင်တွင်း သေသည်အထိ ကျခံရမည့် ပြစ်ဒဏ်မျိုး ချမှတ်ပေးရန် - Yangon Media Group
သက်ငယ်မု ဒိမ်းမှုကျူးလွန်သူများကို ထောင်တွင်းသေသည်အထိ ကျခံရမည့် ပြစ်ဒဏ်မျိုးချမှတ်ပေးရန်တောင်းဆိုကြောင်း တရားလွှတ်တော်ရှေ့ နေ ဒေါ်လှလှရီက ပြောသည်။ လိင်အကြမ်းဖက်မှုပပျောက် ရေး၊ ကြီးလေးပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ပေး ခေါင်းစဉ်ဖြင့် မတ် ၁၈ ရက်က ရန်ကုန်မြို့ ကန်တော်ကြီးမျှော်စင် ကျွန်းတွင်ပြုလုပ်သော သက်ငယ်မုဒိမ်းပညာပေးလူထုလှုပ်ရှားမှုတွင် Legal Clinic Myanmar ဒါရိုက်တာ တရားလွှတ်တော်ရှေ့ နေ ဒေါ်လှလှရီကဟောပြောစဉ် အထက်ပါအတိုင်းထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
”အခု မြန်မာနိုင်ငံဥပဒေအရ ၃၇၆ မှ ထောင်ဒဏ်အနှစ် ၂ဝ နဲ့ ငွေဒဏ်ပေါ့။ ကြီးလေးတဲ့ပြစ်ဒဏ်ဆိုတာရောဘာလဲ။ အဲဒီတော့ သူတို့တွေကို ပြစ်ဒဏ်ချကတည်းက ထောင်ကျတဲ့နေ့ကစပြီး သေတဲ့ အထိကျသွားစေမယ့်ပြစ်ဒဏ်မျိုး တွေကို ကျွန်မတို့တောင်းဆိုပါတယ်”ဟု ၎င်းက ပြောသည်။ သက်ငယ်မုဒိမ်းကျင့်ခံရခြင်းမှာ အကြောင်းရင်းနှစ်ရပ်ရှိကြောင်း၊ ပထမအချက်မှာ ကလေးများသည် အသိဥာဏ်ဖွံ့ဖြိုးမှုအားနည်းသေး သည့်အတွက် ပစ်မှတ်ထားခံရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ ဒုတိယအချက်မှာ ကလေးများ၏ခန္ဓကိုယ်ဖွဲ့စည်းပုံအရ လူကြီးများကဲ့သို့ ရုန်းကန်ခုခံနိုင်သည့်အင်အားမျိုးမရှိကြောင်း ၎င်းက ပြောသည်။ ”မုဒိမ်းလည်းကျင့်တယ်။ ကျင့်ရင်းနဲ့သေသွားတာတွေအများကြီးရှိနေတယ်။ အဲဒီတော့ ကျွန်မတို့က ကြီးလေးတဲ့ပြစ်ဒဏ် ချမှတ်ပေးရုံနဲ့ လုံလောက်ပါ့မလား။ ကြီးလေးတဲ့ပြစ်ဒဏ်ဆိုတာ ဘာလဲ။ ရှေ့နေတစ်ယောက်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ ဒါဟာ လုံးဝမလုံလောက်ဘူးလို့ပြောချင်တယ်”ဟု တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ ဒေါ်လှလှရီက ပြောသည်။
ယနေ့ပြုလုပ်သော လူထုလှုပ် ရှားမှုတွင် သက်ငယ်မုဒိမ်းဆိုင်ရာ ပညာပေးသရုပ်ဖော်ပြကွက်များ ပြသခြင်း၊ ပညာပေးလက်ကမ်းစာ စောင်များပေးဝေခြင်း၊ ဗီနိုင်းစာရွက်များဝေငှခြင်းတို့ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး သက်ငယ်မုဒိမ်းမှုကျူးလွန်သူများနှင့် လူသတ်မုဒိမ်းမှုကျူးလွန်သူများအား ပြစ်ဒဏ်ပြင်းထန်စွာချမှတ် ပေးရန် တောင်းဆိုကြသည်။ ယခုလှုပ်ရှားမှုကို Stop Sexual Violence အဖွဲ့မှ ဦးဆောင် ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပြီး တရားလွှတ် တော်ရှေ့နေဒေါ်လှလှရီ၊ မော် ဒယ်သရုပ်ဆောင်ထားထက်ထက်၊ ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်စမိုင်းနှင့် စွန့်ပစ်ကလေးနှင့် သက်ငယ်မုဒိမ်း ကျူးလွန်ခံရသူများအား ကူညီ စောင့်ရှောက်သူ ကိုစိုးထိုက်(ဖဒို) တို့က ဟောပြောခဲ့ကြသည်။ ယခုလှုပ်ရှားမှုသို့ လိင်အကြမ်းဖက်မှုပပျောက်ရေး ကြီးလေး ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ပေး စာတန်းပါ အင်္ကျီအဖြူဝတ်ဆင်ထားသည့် ပြည်သူ ၂ဝဝ ခန့်နှင့် အနုပညာရှင်များတက်ရောက်ခဲ့သည်။
မြဝတီ-ကော့ကရိတ် အမြန်လမ်းမကြီး အနီးရှိ တောနော်ရေတံခွန်၌ ညအိပ်အနားယူ အပန်းဖြေနိုင်ရန် စခန်?
မန္တလေးမြို့တွင် လေပြင်း တိုက်ခတ်မှုနှင့် မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းမှုကြောင့် နေရာအချို့တွင် လ
ရန်ကုန် မျက်စိအထူးကု ဆေးရုံကြီးတွင် သန့်ရှင်းရေးများ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း အပြင် ခွဲခန်းသုံး ??